Vaovao Mafana · Aogositra, 2012 · Global Voices teny Malagasy
Vaovao Mafana · Aogositra, 2012
Tantara mikasika ny Vaovao Mafana tamin'ny Aogositra, 2012
Amerika Latina10 Aogositra 2012
Nametraka tantara ilay atleta amin’ny Olaimpika Javier Culson (@JavierCulson) tamin’ny nandrombahany ny medaily sabamena (alimo) tamin’ny taranja hazakazaka 400 metatra misy fefy tamin’ny Lalao Olaimpika 2012 ao Londres. Ity no medaily Olaimpika voalohany azon’i Poerto Riko taminà lalao hafa ankoatra ny lalao ady totohondry. Tamin’ny medaily azon’I Culson, efa fito...
Mankalaza ny asa sy ny fiainan'i Dr Essam Mohamed Heggy, izay mpikaroka ao amin'ny NASA ihany koa, manampahaizana momba ny siansan'ny planeta ary isan'ireo ao anatin'ny tarika siantifika nirotsaka amin'ny fikarohana momba ny fiainana eny amin'ny planeta Mars ireo Ejiptiana manaraka manaraka ny dian'ny Mars Curiosity rover.. Ireo fanehoan'kevitra ao...
Filipina: Tondra-drano Tao Metro Manila.
Azia Atsinanana08 Aogositra 2012
Niteraka tondra-drano ny orambe mivatravatra tao amin’ny faritra maro ao Metro Manila sy tao amin’ny faritany akaikin’I Nosy Luzon, ao Filipina. Metro Manila, tanàn-dehibe ao an-drenivohitry ny firenena, izay ahitana tanàna sy kaominina 17. Nanapa-kevitra ny goveremanta fa hatsahatra aloha ny fampianarana sy ny asa na ny an’ny fanjakana izany...